ỌDỤ ỤGBỌELU ỤMỤERI, IHE E JI ANAPỤ NDỊ ANAMBARA EGO – IRF – hoo!haa!!
ỌDỤ ỤGBỌELU ỤMỤERI, IHE E JI ANAPỤ NDỊ ANAMBARA EGO – IRF
Enugwu – Otu Igbo Renaissance Forum (IRF) akọwaala atụmatụ ịrụ ọdụ ụgbọelu n’Ụmụeri dị n’Okpuru Ọchịchị Ọwụwa Anyanwụ Anambara nke Gọọmenti Anambara Steeti bagidere dịka ụzọ e ji anapụ ndị Steeti ahụ ego.
Nze Ugo-Akpe Ọnwụka, Onye Nlekọta Ukwu otu a kwuru nke a n’ozi o wepụtara ndị nta akụkọ n’ụtụtụ taa n’Enugwu.
Ozi ahụ kwuru sị, “Anyị chọrọ ime ka ndị Anambara, ọnọ n’ụlọ nakwa ọnọ na mba mara na steeti ha nọ na nsogbu!
” Okenye anaghị anọ n’ụlọ ewu a mụọ n’ọ́gbụ́.
“Anyị na-arụtụ aka n’ozi e wepụtara na ngwụcha nzukọ nke Ọgbakọ ndị Okenye Anambara Steeti nke e mere Ụlọ Obibi Gọvanọ Anambara Steeti n’Ọka n’abalị anọ nke ọnwa Maachị, afọ 2020, anyị hụrụ na ọ dị oke mkpa ndị Anambara Ikwupụta Ọnọdụ Mberede iji zọtanwuo ihe ka fọdụrụ na Steeti ahụ”
Ozi ahụ kọwara na ndị bịara nzukọ ahụ gụnyere Gọvanọ Wili Obianọ, Ichie Emeka Anyoku, Onyeisi Oche Ọgbakọ ndị Okenye Anambra Steeti,Igwe Nnaemeka A. Achebe, Obi Ọnịcha nakwa Onyeisi Oche ndị eze ọdịnala n’Anambara Steeti tinyekwara ndị ọzọ.
Otu IRF kwuru na ntụ jupụtara na ya bụ ozi mana ebe ha chọrọ itinye ọnụ bụ okwu gbasara ịrụ ọdụ ụgbọelu n’Ụmụeri.
“Ọrụ ahụ kwesịrị iri ihe karịrị Ijeri Dọla abụọ bụ nke Gọọmenti Anambara Steeti kwuru na a ga-arụ site n’atụmatụ a kpọrọ” Build, Operate, Manage & Transfer (BOMT) ” nke na oke ego Gọọmenti steeti ahụ kwesịrị itinye bụ 5% nke kwesịrị ịbịa n’udịrị iweta ala, itinye ụzọ nakwa ihe ndị ọzọ.
“Sinoking, ụlọ ọrụ si mba Chaịna ga-etinye 75%, ebe ụlọ ọrụ Orient Oil ga-etinye 20%.
” Kaosiladi, ndị okenye binyere aka nịkwado ọdịda site na ikwu na ọrụ ọdụ ụgbọelu ahụ na-aga nke ọma ebe o nwebeghi ihe ọbụla a rụrụ n’obosara ala ahụ. Sọọsọ ndị nọ ebe ahụ bụ ndị Fulani na-achị ehi nakwa ehi ha.
” Ọrụ ahụ a malitere n’abalị iri n’otu nke ọnwa Eprel afọ 2017 kwesịrị iwe afọ atọ.
” Ndi Okenye a kelekwara onye ọrụ ngo ji ọrụ ahụ maka ọmalincha aka ọrụ ya.
“N’okwu ọ gwara ndị nta akụkọ n’ọnwa Ọktoba, afọ 2019, Mazị Masel Ejiọfọ kwuru na Gọọmenti steeti ahụ na-amapụta Ijeri Naira isii itinye n’ọrụ ọdụ ụgbọelu ahụ iji mee ka ọrụ na-aga n’ihu ebe onye ọrụ ngo ji ọrụ ahụ na agba ọnyụpa.
” Keduzi ebe ọ dị n’ime akwụkwọ mkpebi ọrụ ngo ahụ (MOU) na Gọọmenti Anambara Steeti ga-eji Ijeri Naira isii ego akpa ya were malite ọrụ ahụ?
IRF kwukwara na mmechi, na ha na ” akpọku Ọgbakọ Ndị Okenye Anambara Steeti ka ha kpọọ nzukọ ndịsonwere iji were anya hụ ka ọrụ ahụ si aga, karịa ichekwube na onyonyoo e gosiri ha.
Otu a kwukwara na ụzọ muchi muchi e ji arụ ọrụ ahụ gosiri na eziokwu dị n’okwu Onye bụbu Mịnịsta maka Njem Ụgbọelu, Ichie Osita Chidọka kwuru, ” A jụrụ atụmatụ ọrụ ọdụ ụgbọelu ahụ kpamkpam. Ihe na-aAnambara abụghị ọdụ ụgbọelu ga-efu Ijeri dọla abụọ n’ụma abụọ ebe Gọọmenti Etiti ji Narị nde dọla ise were rụọ ọdụ ụgbọelu anọ”
Previous Post: GỌỌMENTI LEGỌS STEETI NA-ACHỌ MMADỤ ABỤỌ DỊ KA HA EBU ỌRỊA CORONAVIRUS ACHỌ
Next Post: ỤMAHỊ ANỌKWA? FỤLANI ASỤỌLA NDỊ EBỌNYỊ AKWỤ